5390 ကျပ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » 5390 ကျပ်
Posted by mayday on Oct 30, 2011 in My Dear Diary | 12 comments
ကျွန်တော့ ပွိုင့် 5390 ကျပ် ရနေပါပီဗျ ။ ဘယ်မှာ လာထုပ်ရမလဲဗျ ။ Admin ဆီမှာလား ။ Admin ဘယ်မှာနေလဲဗျ ။ ဒါမှမဟုပ် Bank ကနေလွှဲပေးမလားဗျ ။ ကျွန်တော့ အင်တာနက်ဆိုင် သွားပီး ပို့စ်တင်စရာရှိလိုပါ ။ ကျွန်တော့ ပို့စ် က A4 တစ်မျက်နှာလောက်ပါပဲဗျ ။ ဒါပေ့မယ် 5000 ကျပ်ဖိုးလောက်ကုန်မှာ ပီးလောက်မယ် ထင်တယ်ဗျ ။ ဘာလိုလဲဆိုတော့
Try Again တစ်ခါနှိပ် ၁၀ဝ ကျပ်
Reload တစ်ခါနှိပ် ၁၀ဝ ကျပ်
Resend တစ်ခါနှိပ် ၁၀ဝ ကျပ်
Sing In တစ်ခါနှိပ် ၁၀ဝ ကျပ်
Connecting to Sing in (or) Sing in to Connection တစ်ခါဖတ် ၁၀ဝ ကျပ် (Gtalk)
Could not connect to the Google Talk Service (error 0). တစ်ခါဖတ် ၁၀ဝ ကျပ် (Gtalk)
Access has been denied (or) Access Denied (policy_denied) တစ်ခါဖတ် ၁၀ဝ ကျပ်
Network tcp-ip error တစ်ခါဖတ် ၁၀ဝ ကျပ်
အဲလိုပေးနေရလိုပါ။ (ဟုပ်ပါဘူး အဲလောက်ကျနေလိုပါ )။ ဟီး…..ဟီး…..
အခုနက ဂဇက် ကြီးတောင် Error establishingadatabase connection
ဖြစ်သွားသေးတယ် ကျွန်တော်ခေါ်တာ ။ အဲဒါက ၃၀၀ဝ ကျပ်လောက်ကျသွားတယ် ။ ထို့ကြောင့် ပွိုင့် ၃၀၀ဝ ကျပ် တိုးပေးပါ ။ Relode အခါ ၃ဝ လောက်နှိပ်လိုက်ရလို့ပါ။ ဟီး…
ဟုတ်ပ…ကျနော်လဲဝင်ကြည့်တာ၅ခါလောက်ရှိပြီ (Error establishingadatabase connection) ဖြစ်နေတယ်….
ကျနော်တော့ ကိုယ်ဟာကိုပြန်ဖျက် ပွိုင့်တွေပြုတ်ဟဲဟဲ။
တခါတရံပါ အမြဲတော့ မဟုတ်ပါဘူး
အားမငယ်နဲ့ ၁သိန်း ရဖို့ ၁နှစ် အားထုတ်ရတယ်။ အခုခေတ် ပွိုင့်နှုန်းနဲ့ဆိုရင် ၂နှစ်နဲ့ အထက်မှာ ရှိတယ်။
ဒါတောင် ပုံမှန် ဇွဲရှိရှိ အားထုတ်နိုင်မှ ရမယ်။ ထိုကဲ့သို့သော အချိန်ပေါင်း မြောက်များစွာကို ကျော်ဖြတ်ရမယ်။ အားတင်းထား.. အားတင်းထား
ခုထိ ၂ တောင်းက မတက်ဝူး
အ…အာ…အား…အား တင်းထားမယ်ဗျို ။
ရေရောရေရော အဲလေယောင်လို့ ကြိုးစားကြိုးစား ;)
ပွိုင့်တော့မတိုးပေးဘူးတဲ့ ။ ပွိုင့်ပြန်လှူရင်လက်ခံမတဲ့ ။:)
ကျုပ်တို ့က ဝါသနာကြီးလွန်းလို ့
တစ်နာရီ ၃၀၀/၄၀ဝ ပေးပြီး
နင် ့ပွိုင်တွေ မလိုချင်ရင်
လိုအပ်တဲ့နေရာ ကို ပေးလိုက်ပေါ့
ဟုပ်ပါတယ် ဗျာ ။ ပွိုင့် က အရေးမကြီးပါဘူး ။ ဂေဇက်မှာ ရင်ဖွင့်ခွင့်ရတာကို ကျေးဇူး အရမ်းတင်လှပါပီဗျာ ။ ပွိုင့် လိုအပ်နေသူများကို လဲ ကျွန်တော့ ပွိုင့်ကို လှူဖို့ အသင့်ပါ ။ ပွိုင့်ကို ပို့စ် နာမည်ပေးတာက ပို့စ်ကို တောချင်လိုပါ (စချင်လိုပါ) ။ အဓိက က ကျွန်တော် တို့ အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်တွေ ဒီလိုဖြစ်နေတယ် ၊ ဒီလိုသုံးနေတာရတယ်ဆိုတာလေးကို ရေးချင်လိုပါ ။
စိတ်မဆိုးတတ်တာက ကျွန်တော့ရဲ့ မွေးရာပါ အရင်းခံ စိတ်လေးပါခမျာ ။
နှစ်ကြာတော့ မရေးနိုင်ဘူးထင်တယ်ဗျ။ မရေးနိုင်တော့ရင် သူကြီးကို ပြောရအုန်းမယ် ပွိုင့်တွေကို လှူပါတယ်လို့။
ဒီမှာဝင်ရေးနေတဲ့ လူတွေက ပွိုင့်ထက် ရွာလည်ရတာပျော်လို့ပါ ….. ။ အသိမြင်ဖလှယ်လို့ရသလို ….ကိုယ်ပိုင်ထင်မြင်ယူဆချက်ကို ဆွေးနွေးလို့လည်းရတယ် … ဒီလိုပါပဲ … ဇွဲမလျှော့နဲ့ .. ဆက်ရေးထား … ။
တို့ တော့ တစ်နှစ်တိတိ ပြ့်တဲ့ အချိန်မှာ 30000 ကျော်တယ်ဆိုရုံပဲ…။ နောက်ထပ် 3နှစ်လောက် နေမှပြည့်မဲ့ သဘောရှိတယ်..။ ဒီတော့ကာ ကိုယ်ပြောချင်တာတွေ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပြောနိုင်ပါတယ်…။ ကိုဖတ်ချင်တာတွေလည်း ဖတ်နိုင်တာပဲ…။ ဒီအတိုင်း ဝက်ခြံတွေဝင် ချက်တင်းတွေ ထိုင်နေမှာနဲ့စာရင် ……….